တို့များလစာဘယ်တော့များမှတိုးမလဲ….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » တို့များလစာဘယ်တော့များမှတိုးမလဲ…..
Posted by snow white on Jul 4, 2012 in My Dear Diary | 47 comments
စနိုးလစာထုတ်ရက်ရောက်မှာကြောက်တောင် ကြောက်တယ် စနိုးတို့ဘဝကပိုက်ဆံလေး၇၀၀၀၀ဝ ၈၀၀၀၀ဝ ရောက်ဖို့ကို တစ်လလုံးအချိန်တွေ လုပ်အားတွေ ပေးကျရတယ် ၅၀၀ဝတန်ထွက်လာတော့ လစာထည့်ပေးတဲ့ အိတ်လေးထဲ မှာ ပိုက်ဆံကပါးပါးလေး ပါလို့ပါမှန်းတော့မသိတော့ဘူး ၅၀၀ဝတန်လေး ၁၄ရွက်ဆိုတော့ ပါးပါးလေးဖြစ်နေတာပေါ့ အော် င့ါလုပ်တဲ့တစ်လလုံးလစာက ၅၀၀ဝတန်လေး၁၄ရွက်ပါလားပေါ့ ခုတော့ ၁၀၀၀ဝတန်ထွက်လာပီ လစာထုတ်ရက်ရောက်ရင် ၁၀၀၀ဝတန်လေးရရွက်လေး ပေါ့နော် လစာကသာနည်းတာ သုံးတာကျတော့မြန်သားနော်၃၀ ၃၁ ရက်လစာထုတ်တယ် ၃ရက်နေ့လောက်ဆို ကုန်ပီ တစ်လလုံးအလုပ်ပြန်လုပ် လစာထုတ်ကုန်နေ ပီ ပိုက်ဆံအရွက်ကြီးတွေ သာ ထွက်နေ တို့သူဌေးများဘယ်တော့များမှ လစာတိုးပေးမလဲ လေ စောင့်ရင်း အသက် တရက်ကြီးပြန်ပြီ…………………………
လစာရတာ က၇၀၀၀ဝ ၈၀၀၀ဝ ရေးတာ
မှားကောင်းအဲ့လောက်လစာရချင်သားအိပ်ငို်က်နေတာလေ အလုပ်အားတုံးလေးရေးလိုက်တာ ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးအမှားကောင်းလေး အဲ့လစာလိုချင်နေတာ သူဌေးတာဒီ ရေးထားတဲ့စာလေးတွေ့သွားရင် တက်သေလောက်ပီ သူမပေးနိုင်လို့လေ ၅၀၀ဝတို့ဖို့တောင် ၃လကျော်သွားပီ ။။။။
မှားကောင်းအဲ့လောက်လစာရချင်သားအိပ်ငို်က်နေတာလေ အလုပ်အားတုံးလေးရေးလိုက်တာ ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးအမှားကောင်းလေး အဲ့လစာလိုချင်နေတာ သူဌေးတာဒီ ရေးထားတဲ့စာလေးတွေ့သွားရင် တက်သေလောက်ပီ သူမပေးနိုင်လို့လေ ၅၀၀ဝတို့ဖို့တောင် ၃လကျော်သွားပီ ။။။။ မှားတာလေးပြင်ဖတ်ပေးနော် ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး လစာက၇၀၀၀ဝ ၈၀၀၀ဝ သုညတစ်လုံးပိုသွားတာ သေချာစစ်ပါတယ် ရှမ်းတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့ ပြန်ပြင်ဖတ်ပေးနော် အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ် သုညပိုပါသွားလို့။။
တန်အောင်လို ့တော့ ၁၅ကျပ် တော့ရအောင်ယူရမှာဘဲ
စနိုးရယ်တစ်လကို ငါးထောင်တန် ၁၄ ရွက်တောင်ရတာလား အခိုင်တို့လို ၂ရွက်ပဲရတယ်လူဒွေကျတော့ တစ်လလုံးကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းနေရမလဲကွယ် ……. အော်ဒါကလည်း ကိုယ့်ပညာကိုယ့်အရည်အချင်းပေါ် မူတည်တယ်လို့ပဲခေါ်မှာပေ့ါနော် ……….
ခိုင်ခိုင်ရတဲ့ 2ရွက်က 100 တန်မဟုတ်လား
မဟုတ်ရပါဘူး မမနိုဗွီရယ် …. တစ်ရာတန်တောင် မြန်မာငွေဖြစ်ရင်မှန်မှာပါ ….. မှန်တာပြောရင် သိန်း ၁၅၀ဝ ဆုကို ဆယ်လဆက်တိုက်ပေါက်ရပါစေ။
ဒါဆို ချက်လက်မှတ်ပဲဖြစ်ရမယ် ..ဟုတ်တယ် မို့လား မမခိုင် ။
ခေတ်ကို က အတိုခေတ် ဖြစ်နေတော့ပါလားဗျာ …
ပို့စ်ပါ အကြောင်းအရာ ပြောရရင် …
ခု ၁သောင်းတန် ထွက်ပြီလေ …
၁၄ရွက် ထူတယ် ထင်ရင် ရရွက် ပြောင်းကိုင် ပေါ့ …
အဲ … အွန်လိုင်းဘန့်ကင်း ဖွံ့ဖြိုးလာလို့ကတော့ ..
ရရွက်တောင် ကိုင်ရမယ် မမှတ်နဲ့ …
လခထုတ်ရက် မနက် ဝဝးဝဝ နာရီ ဆိုတာနဲ့…
ကိုယ့် အကောင့်ထဲ ကို ကန်ပနီအကောင့်ကနေ တခါတည်း
မန်းနီး ထွမ်စဖာ …ပီးသား ….
စိတ်ပါရင် မအိပ်ဘဲ အွန်လိုင်းကနေ ဘဏ်အကောင့်ကို လော့ဂင်ဝင်
အက်ဖ်ဖိုက် ထိုင်နှိပ်ပီး စောင့်ကြည့်လို့ရသေးရဲ့…
အဲ … သုံးတော့လည်း ..ကတ်ရှ်ကတ် နဲ့ …ဂျိ ကနဲ ဂျိကနဲ ဖြတ်ပီး
သုံးနိုင်ရဲ့ …အိတ်ထဲမှာ အအေးသောက်ဖို့အတွက် အကြွေဇိ ..လောက်ပဲ
ဆောင်ရတဲ့ ခေတ် ဖြစ်လာစေချင်ပါဘီ ဗျာ..
ကျုပ်ကွန်းမန့်တောင် ညည်းပိုစ့်ထက် ရှည်သွားဘီ…
စိတ်ကြီးဘဲ ရေးချင်တာပေါ့လို့” ပစ်စလက်ခတ် မျက်ရည်” တို့လိုစနိုးတို့က ဆရာကြီးမှမဟုတ်တာ စနိုးတက်သလောက်မက်သလောက်လေးနဲ့ ရေးတာပါ သူကြီးတောင်ပို့စ်တို့လို့ လာမပြောသေးဘူး ဆရာကြီးက စပီ သူကျတော့ အားနေငိုဖို့လောက်ခဲစဉ်းစားနေပြီးတော့ သူများကိုအပြစ်ပြောတဲ့သူတွေကို မုန်းတယ် သိပါတယ် ပစ်စလက်ခတ်မျက်ရည်လောက်မတော်ပါဘူးပညာလေးတွေသင်ပေးလေ ပညာကျတော့ လျှိုနေပြီးတော့ စနိုးက ပို့စ်တိုတာဘဲ ရှိတယ် အဲ့လိုပြောကြေးဆို ဘာမှ လည်းမရေးဘဲ နဲ့ အဖြူဘဲ မြင်ရတာဆိုဘယ်လိုပြောအုံးမလဲမသိဘူး။
ကျုပ် ဘာဆြာဂျီးမှ မဟုတ်သလို ..
ဘာပညာ မှလည်း လျှိုဇယာ မရှိဘူး …
ပိုစ့်ဘေးမှာ တင်ရှိတဲ့ ဟောဒါလေးတွေ ဖတ်စေချင်ရဲ့ဗျာ..
ညီမလေးရေ ( ၂၂ နှစ်ဆိုလို့ပါနော်) ..
Zawgyi Font နဲ့ရေးတာပဲဆိုရင်
-ု (တစ်ချောင်းငင်)၊ န တို့မှာ -့ (အောက်ကမြစ်) ထည့်ချင်ရင်
shift key နဲ့ Y key ကိုတွဲနှိပ်ပေးနော်..
သကြားလုုံးကြော် says: (Edit)
အခုုမှပဲ Shift+Y နှိပ်ရနယ်မှန်းသိတော့တယ်။
ကိုုယ့် အောက်ကမြစ်တွေ ကြည့်မကောင်းတာ ဘယ်သူ့မေးရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ အတော်ပဲ။
သများမောင်လေး …မိုးဇက် တော့ စိတ်ထိခိယက်တော့မှာပဲ….
ကျေးဇူးတင်ဇဂါးကျ တော့ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ရေးပီး ..
မှာလည်း မလိုက်နာ သလို
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ..ပညာရှိုတယ် တို့ …
သင်ပေးပါလား တို့ …ပြောထားလို့ …
သင်တဲ့လူက သင်ပေးတာလေးကျတော့ လိုက်လုပ်သလား ..ကြည့်ကြည့်တာပါ…
သများ မောင်လေး မိုးဂုတ်… (ဂုတ်နဲ့ဇက် ဘာမှမကွာဘူး)
စိတ်ထိခိယက်သွားရင်… သများ ရရက်တိုင်တိုင် မီးဒုတ် ကိုင်ပီး …စန္ဒာ ပြပါမယ်…
အမ်ပီတီ … မြန်မာ ပက်ကျိ တက္ကနစ်ရှင်တွေရဲ့ ကော်နက်ရှင် ကြားကအန်တုပီး
ကောမန့်တွေ အများကြီး ဝိုင်းပေးထားကြတဲ့
ရွာသူားတွေ ကို အမှန်တကယ် ခင်မင်တယ်ဆိုရင် …ပိုစ့် ကို ရှည်ရှည်ရေးစေချင်ကြောင်း ရယ်ပါ…
Snow white ရေ
ဂေဇက်နာမည်ကြီးခဲ့တာ ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစကြောင့် လို့ မင်းထင်နေရင်…..
မော …ဟီး အဆဖော်ရသွားပီ
တို ့တွေမှာဆို အလုပ်တောင်မယ်မယ်ရရ ရှိဘူးရယ်။
အော်..စနိုးရယ် လစာ ရသိန်း ၈သိန်းရတဲ့စနိုးကပြောနေတော့ နာတို့ သောင်းဂဏန်း
ကျွန်တော်တို့ ရွာသူရွာသားတွေကိုလည်း အားနာပါဦးဗျ…။
စာလေး ရှစ်ကြောင်းလောက်ရေးပြီး ပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်တယ်ဆိုကတည်းက
ကျန်တဲ့ လူတွေကို ဂရုမစိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်နေပြီဗျာ…။
ဒီလောက်လေးနဲ့ တော့ ပို့စ်မတင်ဖို့
အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး မုန်းတာတော့မမုန်းချင်ပါဘူး စာလေး ရှစ်ကြောင်း လောက်ရေးပြီးပို့တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး မေးပြီးတော့ မှ ရေးတာ သတ်မှတ်ထားလို့လား စာလေးနည်းနည်းနဲ့ပို့စ်မတင်ရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားရင်လည်း နောက်မတင်တော့ ဘူးမန်ဘာစဝင်ထဲ က မသတ်မှတ်ထားဘူးထင်လို့ ရေးတင်တာ မကြိုက်ရင်လည်း ကွန့်မတ်လာမပေးလည်းဖြစ်တယ် အမြင်ဗဟုသုတ ဖလှယ်ရတယ်သတင်းလေးတွေဖတ်ရတယ်ဆိုလို့သာမန်းဂေဇက်မှာစနိုးတို့ပျော်နေတာ စာလေး ရှစ်ကြောင်းလောက်နဲ့ လည်း အမြင်တူ အကျိုးတူသူတွေနဲ့လည်းပြောလို့ရလို့ ဒီစာလေးကိုတင်တာပါ ကို blackchaw တို့လို့လည်း မတော်ပါဘူး အသိဉာဏ်ချင်ဖလှယ်တဲ့သဘောပါဘဲ ။။
ပိုက်ဆံလေး၇၀၀၀၀ဝ ၈၀၀၀၀ဝ ရောက်ဖို့ကို တစ်လလုံးအချိန်တွေ လုပ်အားတွေ ပေးကျရတယ် ရှိုဘဲ
များတို့ရ သောင်း ၈ သောင်းတောာင် အနိုင်နိုင်
လစာမှာသုညတလုံးပိုတာလား ၅၀၀ဝ တန်အရေအတွက်မှာ သုညတလုံးလိုတာလားဟင်။ နဲနဲပဲကွာနေတယ်။ ခြောက်သိန်းနဲ့ သုံးသောင်းလေးပါ။
စနိုးလစာထုတ်ရက်ရောက်မှာကြောက်တောင် ကြောက်တယ် စနိုးတို့ဘဝကပိုက်ဆံလေး၇၀၀၀၀ဝ ၈၀၀၀၀ဝ ရောက်ဖို့ကို တစ်လလုံးအချိန်တွေ လုပ်အားတွေ ပေးကျရတယ် ၅၀၀ဝတန်ထွက်လာတော့ လစာထည့်ပေးတဲ့ အိတ်လေးထဲ မှာ ပိုက်ဆံကပါးပါးလေး ပါလို့ပါမှန်းတော့မသိတော့ဘူး ၅၀၀ဝတန်လေး ၁၄ရွက်ဆိုတော့ ပါးပါးလေးဖြစ်နေတာပေါ့ အော် င့ါလုပ်တဲ့တစ်လလုံးလစာက ၅၀၀ဝတန်လေး၁၄ရွက်ပါလားပေါ့
တခုခုတော့များနေပြီ၊ ကိုယ့် post ကိုသေချာပြန်စစ်ပါအုံး snow white ရေ…………
အီ … ကို အညာတမာပြောမှ သတိထားမိတော့တယ် … သုညတွေကို မရေမိလိုက်ဘူး ..ကိုယ့်ဘာသာဖတ်တော့ … ခုနှစ်သောင်းရှစ်သောင်းဆိုပြီး ကျော်ဖတ်သွားမိတယ် … ။ တယ်လျှင်တဲ့ မျက်စိ … ။
သုညပိုသွားလို့ပါ တောင်းပန်ပါတယ် နော် ပြင်ဖတ်ပေးကျပါ ယတြာတော့ကျေကုန်ပါပီ ။
စနိုးရယ် … ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်တတ်မှုလေး အခုချိန်မှာ မွေးမြူလိုက်ပါလို့ … အကြံပေးရင်း .. အားပေးလိုက်ချင်ပါတယ် … ။
သူများ အလုပ်လုပ်နေရသရွှေ့တော့ ဒီလိုမျိုး စိတ်ကူးရှိတာ … ကိုယ်ချင်းလည်း စာပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်လည်း …. ကိုယ့်အတွက် အလုပ်တစ်နေရာ ရှိတာကိုပဲ ကြံဖန်ပြီး ဝမ်းသာလိုက်ပါ ။ သူများတွေ လစာဒီလောက်လည်းမရပဲ တနေကိုယ် မတ်တပ်ရပ်နေရတယ် .. မနက်ကိုး ညကိုး ရပ်နေရတယ် … အထက်လူကြီးက ပရက်ရှာပေးတဲ့အခါ ပြန်လည်ချေပ ဆွေးနွေးခွင့်မရှိပဲ … မဟုတ်လည်း ငုံ ့ခံ ၊ ဟုတ်လည်း ငုံ ့ခံ ကြရတယ် ။ အလုပ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ပါဆယ်လ်နယ်ကိစ္စတွေခိုင်းတာ အထိပါလုပ်ရတယ် ။
ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်က အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ၊ ထိုင်ခုံလည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိတယ် ၊ အင်တာနက်နဲ့လည်း ထိတွေ့ခွင့်ရတယ် ၊ မိုးလုံလေလုံမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုလျှင်ပဲ … ကိုယ်က အတော်ကံကောင်းနေပြီလို့ … ရှာကြံပြီး တွေးပျော်လိုက်ပါနော် … ။
အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား ကြားမှာ … အဲ့ဒီကိစ္စလေးက အမြဲရှိတယ် … အလုပ်ရှင်ကတော့ နည်းနည်းပဲ ပေးပြီး ခိုင်းလို့ ရသမျှ ခိုင်းချင်တယ် ၊ အလုပ်သမား ကလည်း နည်းနည်းပဲ လုပ်ရရ၊ များများပဲ လုပ်ရရ လစာ ပိုလို့ ရသမျှ လိုချင်တယ် … ကိုယ်လည်း အတူတူပါပဲ .. ထိုင်နေရင်းတောင် လစာပိုတိုးလိုချင်တာ သဘာဝပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း အလုပ်ရှင်က ကျေနပ်လို့ ပေးမှ ရမှာ မဟုတ်လား … ကိုယ့်ဘက်က တဆာဆာ တောင်းနေတာတောင် ရချင်မှ ရတာမျိုးမို့ .. သူပေးချင်လာအောင် … ကိုယ့် ကိုယ်ကို အရေးပါပြီး အသုံးဝင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် မြင့်တင်ဖို့လိုပါတယ် ။ ဒါမှသာ လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်ကမရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လာပြီး .. ကိုယ်လိုသလောက် တောင်းနိုင် ဈေးကိုင်နိုင်မှာလို့ မြင်မိပါတယ် …
အဟိ .. ချွန်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော် … နားလည် လက်ခံထားတာ .. အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ … ဟိဟိ
အသုံးနဲ. အဖြုန်း ခွဲခြားထားမှပေါ့၊ ၇၀၀၀ဝ က အသုံးမြ်းတောင် ၁ ပတ်ကျော် ခံပါတယ်ဗျာ
နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း လစာမဟုတ်ပဲ နေ့စာထုတ်ထုတ်ပေးနေရင် ကောင်းမယ်နော် စနိုး …. ဟိ ပြောကြည့်တာပါ ရမလားလို့
ဒါကြောင့် ပြောတယ်။ တစ်ဝက်စားပြီး တစ်ဝက်ကို စုပါလို့လေ.. မနော ရေးထားတာ မဖတ်ဖူးထင်တယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေများကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာလေ… အဲလို ကျင့်ကြည့်ပေါ့ စနိုးလေးရယ် ဟုတ်ဘူးလား။
အစကတော့ June လပေါ့နော်…
နောက်ကျတော့ တစ်ခါ..July ပေါ့နော်…
အခုအချိန်မှာ လစာတိုးပေးပါဆိုတာထက် ကုန်ဈေးနှုန်းမတက်အောင်ပဲဆုတောင်းရဲတော့တယ်။
လစာတိုးလို့သူဌေးတွေက နိုင်ငံတော်ကိုတင်ပြရင်
နိုင်ငံတော်က လုပ်ငန်းရှင်တွေ အကာအကွယ်ပေးဖို ့
ငွေလဲနှုန်းမြင့်လိုက်ရင် ကုန်ဈေးနှုန်းက ထပ်တက်ရင် ပိုဆိုးနေမယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေ အကာအကွယ်ပေးမှ သူတို ့အတွက် အဆင်ပြေမှာလေ။
ဟိုတစ်လောက ဆန္ဒပြလို ့လစာတိုးပေးလိုက်ရလို ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ အကာအကွယ်ပေးဖို ့
ငွေလဲနှုန်းဆွဲတင်ပေးလိုက်တာ နိုင်ငံခြားငွေကိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ
ပိုလို ့တောင်အမြတ် ထွက်သွားတယ်။
မြန်မာငွေနဲ ့လစာရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေတိုးထားတာနဲ ့မကာမိအောင်
ငွေလဲနှုန်းဆွဲတင်ပေးပြီး ကုန်ဈေးနှုန်တက်အောင် ပညာပေးလိုက်ပြီလေ။
လုပ်ငန်းရှင်တွေက တောင် နောက်ထပ်ပြအုံးလေ
တို ့အဘက တို ့အတွက် ငွေလဲနှုန်းဆွဲတင်ပေးဖို ့အဆင်သင့်ပဲတဲ့။
အော်ရယ်… ရေးထားတာ ရသိန်း.. ၈သိန်း..ကို တစ်လလစာဆိုတော့ ပြူးသွားတာဘဲ.. မျက်လုံးလေ..
ဒီလောက်များထာကိုပေါ့… ဆက်ဖတ်လိုက်ကာမှ သုည တစ်လုံးလျော့ပီး ရသောင်း ဆိုဒါ အဖြေပေါ်တော့ဒယ်…
မွန်ကစ်တို့လဲ လစာတို့မဲ့လ ကိုမျှော်နေမိဒါ….
အဲလိုလုပ်ပါ မစနိုးရယ် ….7သိန်း နဲ့ 8 သိန်း ကို ညည်းနေရတယ်လို့ ….
လစာလေး ၇၀၀၀၀၀၊ ၈၀၀၀၀ဝ ကိုရဖို့ လို့ပြောတော့ မျက်လုံးတောင်ပြူးသွားတယ်။ နောက် အောက်က comment ကိုဖတ်မိမှာပဲ သေချာသိသွားတယ် သုည တစ်လုံးပိုသွားတယ်ဆိုတာ။
တစ်ခါသား..လစာထုတ်တော့ စာအိတ်လေးက ပါးပါးလေး…
ထင်လိုက်မိတာက..ငါးထောင်တန်ဖြစ်ချင်ဖြစ်၊ မဟုတ်ရင်တော့ ဒေါ်လှနဲ့များ ပြောင်းပေးလေသလားပေါ့..
ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ လခက ဆယ်ပုံတစ်ပုံပဲ ဖြစ်နေတယ်… ဒုက္ခပါပဲပေါ့..
ရှင်းတမ်းစာရွက်ကို ကြည့်လိုက်တော့လည်း မှန်ပါတယ်…
နောက်မှ ဘယ်ဟုတ်မလဲ..အလယ်မှာ 1 နှစ်လုံးထပ်နေတာကို တစ်လုံးတည်းလို့မြင်ပြီး လျော့ပေးထားတာ… တနင်္ဂနွေနေ့ကြီးဆိုတော့ လစာပေးတဲ့အစ်မကလည်း ရုံးမလာဘူး… နောက်မှ ပြောပြလိုက်တော့ ပြန်ရတယ်.. တကယ့်အမှတ်တရပဲ…
စိတ်မညစ်ပါနဲ့ စနိုးရယ်… ကျားကြီးတော့ ခြေရာကြီးတဲ့.. လစာတိုးလာလည်း ပြန်ကုန်တာနဲ့ မကာမိပါဘူး။ ဘယ်လောက်တိုးတိုး မပိုတာက မပိုတာပဲ…။
ကျားကြီးတော့ ခြေရာကြီးတဲ့.. လစာတိုးလာလည်း ပြန်ကုန်တာနဲ့ မကာမိပါဘူး။ ဘယ်လောက်တိုးတိုး မပိုတာက မပိုတာပဲ…။
၇၀၀၀၀/၈၀၀၀ဝဆိုတဲ့ လုပ်ခလစာနဲ့ တစ်လ/တစ်လကို လှည့်ပတ်သုံးစွဲနေနိုင်တာ ကျွန်တော် မစနိုးကိုချီးကျူးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်အခုထွက်လာခဲ့တဲ့အလုပ်မှာ တစ်သိန်းရတာတောင်အဆင်မပြေဘူး။ အဲဂလိုအဆင်မပြေလို့ လစာတိုးတောင်းတယ်။ မရဘူး။ ခုတော့ လွယ်အိတ်တစ်လုံး ထီးတစ်လက်နဲ့ အလုပ်ပတ်ရှာနေရလေရဲ့။ …ဟဲ….ဟဲ
လစာ လဲ တစ်ပြား မှ မရ၊ အလုပ်ချိန် ကလဲ အကန့်အသတ် မရှိ … တဲ့အလုပ်မျိုးကို အိမ်အလုပ် လို့ ခေါ်တယ်ဗျာ …. ကိုယ့်လစာ နဲ့ ကိုယ် သုံးနိုင်၊ သုံးတတ် တာနဲ့ တင် အားရကျေနပ် မိပါတယ်ဗျာ … အခု နည်းနေပေမယ့် နောင် များအောင် သူဋ္ဌေး ပေးတာ မျှော်နေမယ့် အစားကိုယ့် ဘာသာ ကို လုပ် ယူလိုက်မယ် ဆိိုရင် … အဲ့ဒါလေးပါ .. အားတဲ့အချိန် မှာ မွန်းမံ သင်တန်း လေးတွေ တက်ပြီး ဒီထက် တစ်ဆင့် .. နောက် တစ်ဆင့် .. အဆင့်ဆင့် မြင့်အောင် ကြိုးစားကြည့်ကြမယ်ဗျာ။
ကုန်ဈေးနှုနိးတွေကလစာ တိုးသလို လိုက်တိုးလာတော့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ
ဒို့ကတော့ တိုးဖို့ အဆင်သင့်ဘဲ
လစာ မတိုး ရင် နေပါစေဗျာ ရတာလေးနဲ ့သုံး လို ့လောက် တာ ဘဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာ..အခုတော့
သုံးလို ့ကုန်ရမှာ နဲ ့ရတဲ ့ပိုက်ဆံက မလောက် ဘူး ဖြစ်ဖြစ်နေတာ… စရိတ်စကတွေက ဈေးကြီးလွန်းလှ
ပါတယ် ဗျာ ..ပုံမှန်ဝန်ထမ်း တစ်ယောက် ရတဲ ့လစာက ၇၀၀၀ဝ / ၈၀၀၀ဝ အဲ ့ဒါတောင် လစာကောင်းတဲ့
အလုပ် လို ့ပြောလို ့ရနေပြီ..အဲ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကို အသွား အပြန်ကားခတင် တစ်လကို အသွား ၂၀ဝ အပြန် ၂၀ဝ ဆိုရင်ဘဲ ၁၂၀၀ဝ ကုန်ပေ့ါ .. ကျန်တာလေး က ဖိနပ်လေးက လည်း ပါးပေ့ါ .မိုးတွင်းဆိုတော့
ထီးလေးကလည်း နွမ်း..အဝတ်အစား မဝယ်ဖြစ်တာကလည်း ခြောက်လလောက်ရှိပေါ့ ..လိုတာလေးတွေ
ကလည်း နွေ..မိုး ..ဆောင်း မရိုး နိုင်အောင်ပါဘဲ..အင်းဒါတောင် နေစရာ အခန်းလေးနဲ ့စားဖို ့လေးက
ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ် လေး နဲ ့ဖြစ်နေသေးလို ့…ကွိ.
ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေကို ဥပဒေကြမ်း လုပ်နေပြီဆိုတော့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်နီလေး သန်းနေပြီနော်…..
ကျမတို့ရုံးမှာတော့ ၆လတခါ အရည်အချင်းကြည့်တယ်
ဒီနှစ် bussiness goalကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီး ဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲရယ်
တက်ရင်လည်း နှေးလွန်းလား ဘယ်လိုလဲတို့
ပြောရင်ပြီးမှာ မဟုတ် (မှတ်မိတော့လို့…ဟိ)
အေးဗျာ ..တော်တော်ဆိုးတဲ့လူဒွေ …
သူတို့ကို ဘယ်အရူးက ကြပ်ကြပ်ပေးနေသလဲ မသိ…
မြစ်ကိုအလျားလိုက်ကူးသလိုပဲ (မြန်မာပြည်သိန်းတန်၏ ရွှေသုန္နရီဗွီစီဒီသီချင်းထဲမှာ နေအောင်ပြောတဲ့ စကားလေး) ဟိ